Huang no "Rainbow Rainibe" izay nanova ny tanànany manontolo | Famoronana an-tserasera
Huang Yung-Fu dia miaramila 96 taona nandoko ny trano tsirairay ao an-tanànany mba hamonjy azy ireo amin'ny fandravana. Taichung dia tanàna tsara tarehy nisy trano 1.200 taloha. Ny ankamaroany dia tranon'ireo miaramila efa misotro ronono, nomen'ny governemanta.
Rehefa nandeha ny fotoana dia lasa ny ankamaroan'ny miaramila, raha maro hafa no nanorim-ponenana ary tsy nandao ny tranony. Nonina izy ireo mba hanana ny fiainany ao amin'ny distrikan'i Nantun. Ny hany zava-nitranga dia nihena be ny isan'ny mponina ary farany dia 11 no sisa.
Huang Yung-Fu, rehefa nandeha ny fotoana, iray amin'ny vitsy tavela tao an-tanàna, dia nanomboka handany ny fotoanany handokoana ny tranony amin'ny vorona tsotra, ka rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nitondra ny asany kanto tamina rindrina hafa izy niaraka tamin'ny endrika sy zavaboary samihafa.
Izany dia nahatonga ny sain'ny olona liana nandalo ny tanàna. Noho izany lasa iray amin'ireo tanàna be mpitsidika indrindra faritry ny. Ary miatrika indrindra ny antony nanjanonan'ny governemanta ny tetikasany handrava ireo trano sisa tavela tao an-tanàna izahay.
Na dia mitazona hosodoko aza ny trano mila hery sy ezaka beHuang dia efa nilaza fa hanohy handoko na dia efa 100 taona aza. Ary izany dia ho an'ireo mpitsidika rehetra ao an-tanàna, mampatsiahy azy ireo bebe kokoa ny tantaran'ny angano noho ny amin'ny tanàna tena izy izy io.
Na ny mpizahatany aza nomen'izy ireo anarana hoe "Rainbow Dadabe" i Huang, anarana tonga lafatra ho an'ny olona feno fiainana sy loko be dia be miaraka amina fanahy mpamorona toy izany. Mpanakanto tsy manana traikefa ara-javakanto, saingy noho ny hetsika nataony dia afaka nanova tanàna iray manontolo ho lasa manintona mpizahatany sy toerana tena mitaona fanahy izy.
Fomba iray izay afaka mahatadidy bob.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Tamin'ny faha-96 taonany dia nandoko ny trano tsirairay tao an-tanànany izy mba hamonjy azy io amin'ny fandravana
Tonga amin'ny galeran'ny zavakanto ny zoma mainty
Ny Alphabet of Rock, boky misy sary tsara miaraka amin'ny angano rehetra amin'ity karazana mozika ity